China Tactical Military Sniper égbè égbè akpa 38 inch n'ogologo emeputa na soplaya |Lousun
* Akwa ọrụ dị arọ --- bụ ụlọ ọrụ dị arọ 600D oxford w.2 ugboro PVC mkpuchi, waterproof, inogide, akwa na-eguzogide, mgbochi ịkpụ.
* Padding ---Epe nke 1.8cm ọkpụrụkpụ nke nwere ezigbo njupụta na ngbanwe.
* Nhazi siri ike ma dị irè --- N'ihu nwere nnukwu akpa akpa 3 nwere eriri maka nchekwa agbakwunyere, yana akwa velcro n'akụkụ nke ọ bụla.Nakwa na abụọ ọzọ n'akụkụ zipa akpa.N'etiti n'ihu na nnukwu akpa akpa maka abụọ egbe akpa na obere akpa.
* Ngwa --- Akwadoro na ntụsara ahụ nke eriri ubu na eriri aka nwere nko na loop maka ibu dị mfe.
1. N'ihi na tactical sniper egbe akpa, e nwere ọtụtụ nha, si 36 inch ka 55 inch na-emekarị, na agba: tan, nwa, olive green, isi awọ, woodland camouflage e biri ebi, isi awọ na-emekarị 5 agba ukwuu n'ime, ị nwere ike chepụta adabara agba / ụkpụrụ maka ahịa gị, anyị nwere ike ime ahaziri.
2. CAD ụkpụrụ-eme usoro, anyị nwere ezi ụkpụrụ-eme ikike, otú anyị nwere ike ụkpụrụ ọma dabere na gị imewe ma ọ bụ samples.
3. Ogo, ndị otu anyị na-agbaso ụkpụrụ AQL 2.5-4.0 maka nlele akpa ọ bụla, yabụ mgbe niile, anyị na-enye àgwà siri ike na ahịa oversea.
4. Nkọwa ọ bụla maka ịkwa akwa ọ bụla, anyị na-amụ tupu mmepụta nnukwu ihe ka esi eme ka ndị ọzọ sie ike maka ịkwa akwa zoro ezo na ịkwa akwa doro anya iji mejuo ndị ahịa.
A na-ejikarị akpa egbe eme ihe maka agha na agbapụ.
Nke gara aga: OEM ịchụ nta / agbapụ egbe mkpuchi akpa 52 inch ogologo
Osote: OEM ịchụ nta / agbapụ égbè mkpuchi na ogbo padded
Akpa egbe egbe abụọ nke ndị agha
égbè agha na-ebu akpa nwere ọtụtụ akpa
akpa egbe egbe agha
kenkwucha abụọ égbè égbè ikpe
kenkwucha egbe akpa
Ngwa agha kenkwucha
Usoro egbe egbe ndị agha akọ
Agha Tactical Waterproof Bag 38.5 inch ...
Ịchụ nta waterproof ọchịchịrị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ egbe ikpe 48 inch ...
Ịchụ nta agbapụ waterproof oxford égbè akpa 50...